ဖလားငတ်နေကျ နာမည်ကြီး ခြင်္သေ့သုံးကောင်ကို အနာဆွလိုက်တဲ့ ကက်စပါ ရှမိုက်ကယ် – Sports A2Z
ဖလားငတ်နေကျ နာမည်ကြီး ခြင်္သေ့သုံးကောင်ကို အနာဆွလိုက်တဲ့ ကက်စပါ ရှမိုက်ကယ်
ကက်စပါ ရှမိုက်ကယ်ကတော့ ယူရိုမှာ အင်္ဂလန်အသင်း ဆုဖလားအောင်မြင်မှုမရှိတာကို ခပ်မြန်မြန်ပဲ မှတ်ချက်ပေးသွားခဲ့တာပါ။ ယူရို ၂၀၂၀ ပြိုင်ပွဲရဲ့ ဆီမီးဖိုင်နယ်မှာ အင်္ဂလန်အသင်းနဲ့ ဒိန်းမတ်တို့ တွေ့ဆုံနေပြီး ပွဲကြို သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ ခြင်္သေ့သုံးကောင်တို့ရဲ့ ယူရိုအောင်မြင်မှုမရှိတာအပေါ် ဒိန်းမတ်ဂိုးသမားက ဖော်ပြသွားခဲ့တာပါ။
အင်္ဂလန်အသင်းက သူတို့ရဲ့ ပထမဆုံး ယူရို ဗိုလ်လုပွဲဆီ ရောက်ဖို့ ဒိန်းမတ်အသင်းကို အနိုင်ယူကျော်ဖြတ်လိုနေတာပါ။ ပရိသတ်တွေကလည်း ယူရို ၁၉၉၆ တုန်းက ခေတ်စားခဲ့တဲ့ “ဘောလုံးက အိမ်ပြန်လာနေပြီ”ဆိုတဲ့ သီချင်းကို ယူရို ၂၀၂၀ အရောက်မှာတော့ ပြန်လည်သီဆိုနေခဲ့ကြတာပါ။
ပွဲကြိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ ရှမိုက်ကယ်ကို “ဒိန်းမတ်က သူတို့တွေ အိမ်ပြန်သယ်လာတော့မှာကို တားနိုင်မှာလား”လို့ မေးခဲ့ပါတယ်။ သူကတော့ ခပ်မြန်မြန်ပဲ “အိမ်မှာရော ရှိခဲ့ဖူးလို့လား။ ကျွန်တော်တော့ မသိဘူး။ သူတို့ ယူရိုဖလားရဖူးလို့လား။ ၁၉၆၆ တုန်းကလား။ အဲ့ဒါ ကမ္ဘာ့ဖလားမဟုတ်ဘူးလား”လို့ ဖြေသွားခဲ့ပါတယ်။
ဆက်ပြီးတော့ သူက “အရိုးသားဆုံးပြောရရင် အင်္ဂလန်ကို တားဆီးဖို့ဆိုတာမျိုး ဘာထင်မြင်ချက်မှ ပေးစရာမရှိဘူးဗျ။ အသေးအမွှားကအစ သူတို့အပေါ် အာရုံစိုက်ထားတယ်။ နိုင်ငံအတွက် ကျွန်တော်တို့ဘက်က လုပ်ပေးနိုင်တာပဲ။ လူဦးရေ ငါးသန်းကို ပျော်ရွှင်မှုပေးဖို့ အခုယှဉ်ပြိုင်နေရတဲ့ နိုင်ငံတွေနဲ့ ပြိုင်ဖို့ပဲ လုပ်နေရတာ။ သူတို့အပေါ်တော့ အဲ့လိုခံစားချက် အများကြီးမရှိပါဘူး”လို့ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
အင်္ဂလန်အသင်းကတော့ သမိုင်းတစ်လျှောက် တစ်ခုတည်းသော အောင်မြင်မှုအနေနဲ့ ၁၉၆၆ ကမ္ဘာ့ဖလား အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့တုန်းက အနောက်ဂျာမနီအသင်းကို ၄-၂ နဲ့ ဗိုလ်လုပွဲမှာ အနိုင်ယူခဲ့ပြီး ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တာပဲ ရှိပါတယ်။ ယူရိုမှာလည်း ဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့်ကို ၁၉၉၆ မှာ တစ်ကြိမ် ရောက်ရှိခဲ့ဖူးပြီး ဂျာမနီအသင်းက ပင်နယ်တီနဲ့ အနိုင်ယူတာ ခံခဲ့ရတာပါ။
ဒိန်းမတ်ကတော့ ဆီမီးဖိုင်နယ်ကို ဒီပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်က ပီတာ ရှမိုက်ကယ်တို့ ခေတ်မှာ တစ်ကြိမ်ပဲ ရောက်ခဲ့ဖူးတဲ့အသင်းဖြစ်ပေမယ့် အဲ့ဒီတစ်ကြိမ်ဖြစ်တဲ့ ၁၉၉၂ မှာ ဗိုလ်စွဲနိုင်ခဲ့တဲ့ အသင်းဖြစ်တာကြောင့် သမိုင်းကြောင်းနဲ့ အောင်မြင်မှုအရ အင်္ဂလန်ကို အသာရစေချိန်မှာ ကက်စပါ ရှမိုက်ကယ်တစ်ယောက် သူ့ဖခင်လိုမျိုး ယူရိုပြိုင်ပွဲရဲ့ ချန်ပီယံအဖြစ် အောင်ပွဲခံပြီး ဒီနေ့ညမှာ ဗိုလ်လုပွဲကို အိမ်ရှင့်အသည်းခွဲရင်း တက်ရောက်သွားမလားဆိုတာကတော့…။
ZAWGYI: ကက္စပါ ရွမိုက္ကယ္ကေတာ့ ယူ႐ိုမွာ အဂၤလန္အသင္း ဆုဖလားေအာင္ျမင္မႈမရွိတာကို ခပ္ျမန္ျမန္ပဲ မွတ္ခ်က္ေပးသြားခဲ့တာပါ။ ယူ႐ို ၂၀၂၀ ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ဆီမီးဖိုင္နယ္မွာ အဂၤလန္အသင္းနဲ႔ ဒိန္းမတ္တို႔ ေတြ႕ဆုံေနၿပီး ပြဲႀကိဳ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွာ ျခေသၤ့သုံးေကာင္တို႔ရဲ႕ ယူ႐ိုေအာင္ျမင္မႈမရွိတာအေပၚ ဒိန္းမတ္ဂိုးသမားက ေဖာ္ျပသြားခဲ့တာပါ။
အဂၤလန္အသင္းက သူတို႔ရဲ႕ ပထမဆုံး ယူ႐ို ဗိုလ္လုပြဲဆီ ေရာက္ဖို႔ ဒိန္းမတ္အသင္းကို အႏိုင္ယူေက်ာ္ျဖတ္လိုေနတာပါ။ ပရိသတ္ေတြကလည္း ယူ႐ို ၁၉၉၆ တုန္းက ေခတ္စားခဲ့တဲ့ “ေဘာလုံးက အိမ္ျပန္လာေနၿပီ”ဆိုတဲ့ သီခ်င္းကို ယူ႐ို ၂၀၂၀ အေရာက္မွာေတာ့ ျပန္လည္သီဆိုေနခဲ့ၾကတာပါ။
ပြဲႀကိဳသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာေတာ့ ရွမိုက္ကယ္ကို “ဒိန္းမတ္က သူတို႔ေတြ အိမ္ျပန္သယ္လာေတာ့မွာကို တားႏိုင္မွာလား”လို႔ ေမးခဲ့ပါတယ္။ သူကေတာ့ ခပ္ျမန္ျမန္ပဲ “အိမ္မွာေရာ ရွိခဲ့ဖူးလို႔လား။ ကြၽန္ေတာ္ေတာ့ မသိဘူး။ သူတို႔ ယူ႐ိုဖလားရဖူးလို႔လား။ ၁၉၆၆ တုန္းကလား။ အဲ့ဒါ ကမာၻ႔ဖလားမဟုတ္ဘူးလား”လို႔ ေျဖသြားခဲ့ပါတယ္။
ဆက္ၿပီးေတာ့ သူက “အ႐ိုးသားဆုံးေျပာရရင္ အဂၤလန္ကို တားဆီးဖို႔ဆိုတာမ်ိဳး ဘာထင္ျမင္ခ်က္မွ ေပးစရာမရွိဘူးဗ်။ အေသးအမႊားကအစ သူတို႔အေပၚ အာ႐ုံစိုက္ထားတယ္။ ႏိုင္ငံအတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က လုပ္ေပးႏိုင္တာပဲ။ လူဦးေရ ငါးသန္းကို ေပ်ာ္႐ႊင္မႈေပးဖို႔ အခုယွဥ္ၿပိဳင္ေနရတဲ့ ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ၿပိဳင္ဖို႔ပဲ လုပ္ေနရတာ။ သူတို႔အေပၚေတာ့ အဲ့လိုခံစားခ်က္ အမ်ားႀကီးမရွိပါဘူး”လို႔ ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။
အဂၤလန္အသင္းကေတာ့ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ တစ္ခုတည္းေသာ ေအာင္ျမင္မႈအေနနဲ႔ ၁၉၆၆ ကမာၻ႔ဖလား အိမ္ရွင္အျဖစ္လက္ခံက်င္းပခဲ့တုန္းက အေနာက္ဂ်ာမနီအသင္းကို ၄-၂ နဲ႔ ဗိုလ္လုပြဲမွာ အႏိုင္ယူခဲ့ၿပီး ခ်န္ပီယံျဖစ္ခဲ့တာပဲ ရွိပါတယ္။ ယူ႐ိုမွာလည္း ဆီမီးဖိုင္နယ္အဆင့္ကို ၁၉၉၆ မွာ တစ္ႀကိမ္ ေရာက္ရွိခဲ့ဖူးၿပီး ဂ်ာမနီအသင္းက ပင္နယ္တီနဲ႔ အႏိုင္ယူတာ ခံခဲ့ရတာပါ။
ဒိန္းမတ္ကေတာ့ ဆီမီးဖိုင္နယ္ကို ဒီၿပိဳင္ပြဲမတိုင္ခင္က ပီတာ ရွမိုက္ကယ္တို႔ ေခတ္မွာ တစ္ႀကိမ္ပဲ ေရာက္ခဲ့ဖူးတဲ့အသင္းျဖစ္ေပမယ့္ အဲ့ဒီတစ္ႀကိမ္ျဖစ္တဲ့ ၁၉၉၂ မွာ ဗိုလ္စြဲႏိုင္ခဲ့တဲ့ အသင္းျဖစ္တာေၾကာင့္ သမိုင္းေၾကာင္းနဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈအရ အဂၤလန္ကို အသာရေစခ်ိန္မွာ ကက္စပါ ရွမိုက္ကယ္တစ္ေယာက္ သူ႔ဖခင္လိုမ်ိဳး ယူ႐ိုၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ခ်န္ပီယံအျဖစ္ ေအာင္ပြဲခံၿပီး ဒီေန႔ညမွာ ဗိုလ္လုပြဲကို အိမ္ရွင့္အသည္းခြဲရင္း တက္ေရာက္သြားမလားဆိုတာကေတာ့…။
ဒိန်းမတ်ကို အချိန်ပိုမှာ ကျော်ဖြတ်ပြီး အိမ်ရှင်အဖြစ် ဖလားယူဖို့ နီးစပ်လာတဲ့ အင်္ဂလန်
ပြိုင်ပွဲကြီးတွေမှာ ဒုတိယအများဆုံး ဗိုလ်လုပွဲရောက်တဲ့ အာဇူရီ အီတလီ 1-1 စပိန်ပွဲအပြီး ပြောစရာ7ချက်
Article • Other • Premier League
ပျိုတိုင်းကြိုက် နှင်းဆီခိုင်ဖြစ်ပေမယ့် မိန်းမ ယူဖို့...
Article • Bundesliga • Premier League
ဂိုးသွင်းဖို့အတွက် နေရာယူပြေးလွှားပုံ အကောင်းဆုံး...
Article • La Liga • Other
ဘာစီလိုနာအသင်းမှာ အမှိုက်လောက်တောင် မတန်သလို...
အသင်းကြီးတွေရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲပယ်ခံ ကစားသမား ၁၁...
Article • Premier League
အာနိုးလ်ဒ်ကို ဘာလုပ်တာလဲလို့ ဆောက်ဂိတ်ကို...
မက်ဆီနဲ့ မာရာဒိုနာဟာ မတူညီတဲ့ပုံစံနဲ့ အာဂျင်တီးနားကို...